हजारौको अगाडी धुर्मुस सुन्तलीले मनाए भ्यालेन्टाइन डे ! रङगशालामै घन्कियो बाजा, बिगत सम्झेर रोए …..(न्भिदियो सहित) «
हजारौको अगाडी धुर्मुस सुन्तलीले मनाए भ्यालेन्टाइन डे ! रङगशालामै घन्कियो बाजा, बिगत सम्झेर रोए …..(न्भिदियो सहित)
Published : 14 February, 2020 9:59 pm
चर्चित लोकप्रिय हाँस्य टेलिसिरियल ‘मेरीबास्सै’मा ‘धुर्मस र सुन्तली’को भूमिका गरेपछि एकाएक चर्चामा आएका हुन्, सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे । ललितपुरकी कुञ्जना र झापाका सीतारामवीचको प्रेम-सम्बन्धका प्रसंग निक्कै रोचक छन् ।
यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा व्यस्त रहेका धुर्मुस सुन्तलीले एक अन्तर्वार्तामा प्रेमदिवसको पुराना दिनहरुलाई सम्झिँदै रमाइलो किस्सा सेयर गरेका छन् । धुर्मुस सुन्तली अभिनित चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ महाशिव रात्रीको अवसर पारेर फागुन ९ गतेबाट देशभर प्रदर्शन हुँदैछ ।
बिहे गरेपछि जतिबेला पनि प्रेम दिवस नै आउँदोरहेछ । हामी एकअर्काको साथमा नै भएकाले होला, यही दिनको प्रतिक्षा हुँदोरहेनछ । हाम्रा पालामा त भ्यालेन्टाइन यसरी उखपात रुपमै मानिसले मनाउँदैनथे । मलाई त लाग्छ, यतिबेला हामी भ्यालेन्टाइन डेको ब्रान्ड एम्ब्यासडर नै भैसकेका छौं । हामीले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि एक बर्ष मात्र खतरनाक प्रेम गर्‍यौं । धुर्मुस सुन्तलीको रमाइलो प्रेम कहानी भिडियोमा हेर्नुहोस् :